FAMPANDROSOANA NY FARITRA ATSIMO : Imatimatesan’ny Fanjakana ny hanova ny tantaran’i Madagasikara
Nataon’ireo mpitondra nifandimby teo aloha ankilabao ny Faritra Atsimon’ny Nosy iny hatramin’izay. 12 octobre 2021
Anisany antony fototra tsy mbola nahafoana ny olan’ny hain-tany sy ny kere izay mpahazo isan-taona an’ireo vahoaka any Atsimo izany, noho ny tsy fisian’ny drafitr’asa maty paika sy vahaolana maharitra avy amin’ny Mpitondra tamin’izany fotoana.
Fanamby nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nanao fampielezan-kevitra hofidiana Filoham-pirenena ny tenany ny hoe : « hijoro ho vahaolana ho an’ny vahoaka Malagasy aho ». Aty amin’ny fisasahan’ny fe-potoam-piasany dia hita soritra mazava ny fahatanterahan’ireo velirano natao satria tsy misy ankehitriny na dia iray aza Faritra eto Madagasikara hadino amin’ny asa fampandrosoana. Mivaingana amin’izany ny Faritra Atsimo izay tena imatimatesan’ny Fitondram-panjakana ny famahana an’ireo olana mankadiry iainan’ny vahoaka amin’ny andavanandro.
Anisan’izany ny hain-tany isan-taona izay mihahenjana hatrany, ny tsy fahampian-tsakafo izay miafara amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza sy ny ankizy, ny tsy mba fananana fotodrafitrasa mamaly ny filàn’ny vahoaka ary ny tsy fahampian-drano sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo no hitadiavan’ny Fanjakana vahaolana maharitra ny famahana azy. Hatramin’izay dia lasa manome endrika ratsy an’i Madagasikara ireo olana fototra mbola mangeja ny vahoaka any Atsimo ireo. Hanova tanteraka ny tantaran’i Madagasikara ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny fampandrosoana azo tsapain-tanana ho an’ny Faritra Atsimo, tsy ny Faritra Atsimo ihany fa ny Faritra rehetra manerana ny Nosy.
Famahana ny olan’ny fanabeazana
Toerana maro amina Kaominina mandrafitra an’iny tapany Atsimon’ny Nosy no misedra olana goavana eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana. Ankoatra ny tsy fahampian’ny fitaovana dia sakana lehibe eo amin’ny fampianarana ihany koa ny fotodrafitrasa. Zara raha misy trano bozaka misy tafo no ianaran’ireo mpianatra. Nandritra ny telo andro nandalovan’ny Filoha Andry Rajoelina mivady tany an-toerana no namahany izany olana izany. Anisan’ireo nisitraka ny fahazoana sekoly manara-penitra ny Kaominina Ankiriera. Betsaka ireo Kaominina mbola misedra olana eo amin’izay faharatsian’ny fotodrafitrasa izay kanefa tsy vitsy ihany koa ireo efa nahazo ny Epp manara-penitra.
Raha ny Kaominina Ankiriera manokana dia tsy nisy afa-tsy efitrano iray no nampianarana mpianatra manomboka amin’ny kilasy faha-11 ka hatramin’ny kilasy faha-7. Tery dia tery ny sekoly ka misy amin’ireo kilasy no zara raha mianatra vokatr’izany. Manoloana izany dia nanome fanampiana ny Filoha amin’ny hanamboarana sekoly manara-penitra ho an’ity Kaominina ity. Vita izany ankehitriny izay hahazaka mpianatra maherin’ny 90 isa ; ahitana birao isan-tsokajiny ihany koa. Tsy vitan’izay fa hisy ihany koa ny fanomezana rakibolana amin’ny fitenim-pirenena telo samihafa dia ny teny Malagasy, Frantsay ary Anglisy ho an’ireo ankizy mpianatra. Tsy voatery handeha an-tongotra hody intsony izy ireo rehefa hisakafo ny antoandro fa hisy ny fampisakafoanana azy ireo ao an-tsekoly manomboka izao.
Famerenana amin’ny laoniny ny fandriam-pahalemana
Distrika maro any Atsimo no mbola miaina ao anaty tsy fandriam-pahalemana mivaivay. Velirano voalohany nataon’ny Filoham-pirenena ny hisitrahan’ny vahoaka filaminana na andro na alina. Ankoatra ireo hetsika fampandrian-tany marobe natao sy mbola hatao any Atsimo dia anisany vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana ihany koa ny fisian’ny fotodrafitrasa ho an’ny mpitandro filaminana mba hampifanakaiky azy ireo amin’ny vahoaka. Nisitraka izany ny Distrikan’Amboasary Atsimo.
Vita soa aman-tsara ary notokanan’ny Filoha ny fotodrafitrasa vaovaon’ny vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Amboasary Atsimo. Ity farany dia isan’ny Distrika voasokajy ho Faritra mena satria tena nivaivay tamin’ny halatr’omby sy ny asan-dahalo. Izay no antony lehibe nametrahana izao fotodrafitrasa izao mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mifanindra an-dalana amin’izay tanjona ho an’ny fandriam-pahalemana izay ihany koa dia efa manomboka ankehitriny ny tetikasa fametrahana kavin’omby elektronika. Natao izany hiarovana ny omby, hanavahana azy ireo ary hanamorana ny fitadiavana ny omby raha sendra misy ny fanafihan-dahalo. Nandritra ny fitsidihana nataon’ny Filoha mivady tao amin’ny Kaominina Ankaramena, Distrikan’i Taolagnaro no nanombohana fametrahana kavin’omby elektronika ho an’ny Faritra Atsimo. Omby miisa 50 000 ao amin’ny Faritra Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana sy Ihorombe no hametahana ity kavin’omby ity, hatramin’ny faran’ny taona 2021.
Fanampiana sy fampivelarana ny tantsaha
Tsy diso anjara tamin’ny fandalovan’ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiham-paritra nataony tany amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny ireo tantsaha. Manosika ary manampy azy ireo ny Fitondram-panjakana mba ho afa-mivelatra amin’ny sehatra maro. Tao Agnarafaly Ifotaka, ao anatin’ny Distrikan’Amboasary Atsimo izao dia tokantrano miisa 2 000 no hanajary ny velaran-tany mirefy 200ha. Izany dia tafiditra ao anatin’ilay tetikasa “titre vert”. Hisy ny fanomezana fiofanana ireo fianakaviana voafantina ary homena tany sy biby fiompy mba hahafahan’izy ireo mivelona sy hahaleo tena ary miarina amin’ny fiainana. “Fotoana izao hanarenana ny Faritra Atsimo mba hahazaka tena ary tsy maintsy resentsika ny kere”, hoy ny Filoha. Ny Faritra Atsimo, raha ny nambarany, dia anisany hisitraka ilay famatsiam-bola mitentina 332 tapitrisa Dolara avy amin’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena. Anisan’ny tetikasa goavana amin’izany ny fametrahana fantson-drano lehibe na “pipeline” miainga avy ao Efao mipaka hatrany Ambovombe. Tena mampijaly ny mponina any Atsimo ny rano, antony mahatonga ny hain-tany satria tsy misy ny rano hanondrahana ny fambolena. Tsy ho ela intsony dia ho voavaha tanteraka izany olana izany. Miampy izay dia natomboka tao amin’ny Kaominina Erakoke Maroalimainty ihany koa ny fandaharan’asa “ceinture verte”.
Tsy ho faralahim-pampandrosoana intsony ny Faritra Atsimo manomboka izao. Tsy misy resabe, hoy ny Filoha, fa avy hatrany dia hanomboka avokoa ny asa rehetra izay nampanantenaina ary efa vonona ny vola natokana hanatanterahana izany. Hiova ny fomba fijery ny Faritra Atsimo manomboka izao. Tahaka ireo tetikasa goavana maro amin’ny fanatsarana ny tanàna dia hahazo ny anjarany ihany koa i Taolagnaro, renivohitry ny Faritra Anôsy. Goavana ny fanavaozana hatao eo amin’ny torapasik’i Libanona izay havadika ho toeram-pitsangantsanganana kanto sy tsy manam-paharoa eto Madagasikara. Hivadika ho ambohi-pihaonan’ny rehetra ary hanomezana vahana ny sehatry ny fizahan-tany. Izany no natao dia mba hisian’ny fampandrosoana maharitra, goavana ary misy fiantraikany mivantana amin’ny vahoaka.